Halyeeyga reer Brazil ee Rivaldo oo hal arrin muhiim ah kaga digay Eden Hazard – Gool FM
Halyeeyga reer Brazil ee Rivaldo oo hal arrin muhiim ah kaga digay Eden Hazard
(Madrid) 27 Luulyo 2019. Xiddiga reer Belgium ee Eden Hazard ayaa si weyn indhaha loogu hayaa tan iyo markii uu ku biiray kooxda Real Madrid, sheekadu kaliya ma ahan mid la xiriirta tayadiisa iyo bandhiga uu ka sameynayo gudaha garoonka, laakiin sidoo kale xaaladdiisa jir ahaaneed.
Way iska cadahay in Eden Hazard uu kordhay miisaanka jirkiisa isla markaana uu cayilay, taasina waxay ku cadahay dhaqdhaqaaqyadiisa, iyo sawirada looga qaaday garoonka dhexdiisa, ha ahaato kulankii Bayern Munich ama Arsenal.
Hadaba halyeeyga reer Brazil ee Rivaldo ayaa ka hadlay arintan, isagoo kaga digay Eden Hazard culeyska xad dhaaf ah ee jirkiisa, wuxuuna u jeediyay talo mihiim ah, madaama xiddigii hore ee Samba uu soo maray dhibaato la mid ah tan Hazard sanooyin kahore.
Halyeeyga reer Brazil iyo kooxda Barcelona ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Eden Hazard wuxuu la kulmay eedeymo ku aadan xaaladdiisa jir ahaaneed, laakiin toddobaadyo yar gudahood wuu ku fiicnaan doonaa, wuxuuna diyaar u noqon doonaa in door weyn uu ka ciyaaro bilowga xilli ciyaareedka kooxda Real Madrid”.
“Tababarka ayuu horumar weyn ku sameyn doonaa, wuxuuna ka soo kabsan doonaa fasaxa, waa inuu sidan u sameeyaa si taxaddar leh, haddii kale waxaa laga yaabaa inuu la kulmo dhaawac” ayuu hadalkiisa ku soo xiray halyeeyga reer Brazil ee Rivaldo.
Tababare Mauricio Pochettino oo farriin raali galin ah u diray kooxda Manchester United
Pep Guardiola oo ka naxsaday Lionel Messi kaddib markii uu si cad u sheegay....